मेला व्यवसायीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको हो – indepth.com.np
मेला व्यवसायीको मात्रै होइन, सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको हो
२४ पुष २०७५, मंगलवार १९:०६
माधवप्रसाद प्रजापति, मुख्य संयोजक, तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो २०१९ तथा व्यापार मेला
तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो २०१९ तथा व्यापार मेला विशेष अन्तर्वार्ता
यहीं पुस २६ देखि ३० गतेसम्म भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित ९९ रोपनी खुलाचौरमा तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो २०१९ तथा व्यापार मेला हुँदैछ । भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी संघको आयोजनामा हुने उक्त मेलाबारे इन डेफ्ट मासिकका प्रतिनिधिले संघका उपाध्यक्ष एवं मेलामा प्रमुख संयोजक माधवप्रसाद प्रजापतिसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ । – सं।
मेला भव्य र सभ्य बनाउन के के व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ?
– मेलाको प्रचारप्रसार बृहत रुपमा भइरहेको छ । फेसबुकमा मेला प्रचारार्थ बुस्टिङ भइरहेको छ । मुख्यतः विद्युतीय सामग्री व्यवसायीहरुमार्फत नै मेलाको बारेमा बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । मेलाको प्रचारप्रसारस्वरुप पुस ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका छौं । पुस १० गते विद्युतीय सामग्री व्यवसायीहरुको बृहत भेला हुँदैछ । त्यस्तै पुस १७ गते भक्तपुर क्षेत्र र पुस १९ गते मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा सांस्कृतिक झाँकीसहित प्रचार ¥याली हुनेछन् । ती कार्यक्रमहरुमा मेलासम्बन्धी जानकारी दिने प्रचारप्रसार सामग्री सर्वसाधारणहरुलाई वितरण हुनेछन् । पुस २१ गते काठमाडौं उपत्यका र काभ्रे समेट्ने गरी मेला प्रचार गर्न बृहत मोटरसाइकल ¥याली गर्नेछौं ।
यसबाहेक हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । मेलाको प्रवद्र्धकको रुपमा भक्तपुरका चारवटै नगरपालिका रहेका छन् । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल पर्यटन बोर्डसमेत मेलाका प्रवद्र्धक हुन् । त्यसैले उहाँहरुको तर्फबाट पनि मेलाको व्यापक प्रचारप्रसार भइरहेको छ । मेलाको इन्सुरेन्स पार्टनरको रुपमा प्रभु इन्सुरेन्स निश्चित भइसकेको छ । होटल भ्यू भक्तपुर होटल पार्टनरको रुपमा रहेको छ ।
संघले मेलाको लागि भक्तपुरका अन्य कुन कुन वस्तुगत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दैछ ?
– मेलालाई विद्युतीय सामग्रीहरुको कुम्भ मेला भनेका छौं । त्यसैले एउटामात्रै संघबाट यो मेला सफल हुनसक्दैन । संघसँगै संघका सदस्यहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यस्तै मेला व्यवस्थित बनाउन विभिन्न संयोजन समितिहरु बनाएका छौं । ती समिति र संयोजकहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।
यसका साथसाथै भक्तपुरका रहेका जति पनि वस्तुगत संघसंस्थाहरुलाई मेलामा सहभागी हुन आह्वान गरेका छौं । यसको नेतृत्व गर्न भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यस्तै भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघ, मझौला व्यवसायी संघ, भक्तपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघ, भक्तपुर निर्माण सामग्री व्यापार संघ, भक्तपुर रेडिमेड व्यापार संघलगायतले मेलामा ऐक्वबद्धता जनाउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार उहाँहरुबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेका छौं । उहाँहरुले भरपुर सहयोग गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ ।
अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा भक्तपुरमा मेल गर्न के के समस्या छन् ?
– मेलाको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक व्यवस्थापन हो । आर्थिक व्यवस्थापनविना मेला गर्न सम्भव छैन । लगभग ७० लाख रुपैयाँको बजेटमा यस वर्ष मेला गर्दैछौं । यत्रो ठूलो रकम संघसँग छैन । तर मेलाका प्रायोजक कम्पनी र अन्य उद्योगी व्यवसायी तथा स्टलको शुल्कबाट यो बजेट व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
अर्को मुख्य समस्या मेला स्थलको अभाव हो । भक्तपुरमा मेला गर्न उपयुक्त व्यवस्थित एवं सुविधासम्पन्न स्थल बनिसकेको छैन । भक्तपुर सल्लाघारीको ९९ रोपनी क्षेत्र मेला गर्ने उपयुक्त स्थल हो तर व्यवस्थित छैन । त्यो व्यवस्थितमात्रै भएको भए भक्तपुरमा दिनहुँ मेला हुने अवस्था रहन्छ । यसको लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछु । यसलाई व्यवस्थित र सुविधायुक्त मेला स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिए देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुमा भक्तपुर आकर्षणको केन्द्र बन्ने निश्चित छ । अहिले त्यहाँ जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । पानी परे हिलो हुने र घाम लागे धूलो उड्ने समस्या छ । जसले गर्दा मेला स्थलको व्यवस्थापन गर्न नै महंगो पर्दै आएको छ । खुला ठाउँ भएकाले सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन र चारैतिर सुरक्षा बार लगाउन थप महंगो र चुनौतीपूर्ण छ । यी सबै हामीले गर्न नपर्ने हो भने यहाँ बृहत मेला गर्न सकिन्छ ।
भक्तपुरलाई इलेक्ट्रोनिक्स हब बनाउने भन्दै आउनुभएको छ । त्यसको लागि व्यवसायीहरुबाट के के भइरहेको छ ? के व्यवसायीहरु आफैले प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष बनाउन सकिने सम्भावना छैन ?
– हो, संघले स्थापनाकालदेखि नै भक्तपुरलाई इलेक्ट्रोनिक्स हब बनाउने उद्देश्य लिएर अघि बढेका छौं । भक्तपुर इलेक्ट्रोनिक्सको क्षेत्रमा धेरै पछि पर्दै आएको छ । त्यसैले भक्तपुरलाई नयाँ प्रविधिमा कसरी अघि बढाउने ? भक्तपुरमा इलेक्ट्रोनिक्सको व्यापार व्यवसाय कसरी बढाउने ? भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न भक्तपुरलाई इलेक्ट्रोनिक्स हब बनाउनुपर्छ भन्ने संघको मान्यता हो । यसको लागि एउटा ठूलो ठाउँमा प्रदर्शनी एवं बिक्री कक्ष बनाउन सकिन्छ । नसकिने होइन । यसबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ । भक्तपुरमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बन्ने क्रम बढेको छ । ती कम्प्लेक्समा मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्रीका पसलहरु विस्तार भइरहेका छन् । तैपनि भक्तपुरमा ठूलो ठाउँ पाइयो भने हामी इलेक्ट्रोनिक्स हबको रुपमा विकास गर्न तयार छौं । यसको लागि स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग भने जरुरी पर्दछ ।
मेलाबाट व्यवसायी र उपभोक्ताले के के फाइदा पाउँछन् ?
– संघले पहिले इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पोमात्रै गरेको थियो । यस वर्ष व्यापार मेलासमेत गर्दैछौं । त्यसैले मेलामा बढीभन्दा बढी उत्पादन तथा वस्तु उपलब्ध हुनेछन् । मेलामा आएका सर्वसाधारण कुनै एक वस्तुमात्रै छैन भनेर फर्कन पर्ने अवस्था आउन नदिन हामी लागिपरेका छौं । सर्वसाधारणले सबै चिज मेलामा पाउने भएपछि व्यवसायीहरुको व्यापार पनि बढ्नेछ । सर्वसाधारणले मेलामा पसलमा भन्दा बढी छुट पाउँछन् नै । थप विभिन्न अफरको व्यवस्था हुनेछ । जसले गर्दा व्यवसायीले बढीभन्दा बढी सामान बिक्री गर्ने पाउने हाम्रो विश्वास छ ।
– यो मेला हामी व्यवसायीहरुको मात्रै होइन, सम्पूर्ण भक्तपुरवासीहरुको हो । यसमा विद्युतीय सामग्री व्यवसायीसँगै यहाँका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको छ । भक्तपुरको व्यापार व्यवसाय बढाउन, भक्तपुरको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु¥याउन, पर्यटन तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न र भक्तपुरवासीको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन यो मेला आयोजना गरेका हौं । अतः सम्पूर्ण महानुभाव तथा संघसंस्थाहरुलाई हातेमालो गरी पाँचदिने मेला भव्य र सभ्य तरिकाले सफल बनाउनुहुन आह्वान गर्न चाहन्छु ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड
तीनसयभन्दा बढी वस्तुहरुको प्रदर्शनी मेलाको मुख्य आकर्षण